I-Autotappezzeria Nautical Coatings kanye noSelle Majolo - Palermo
I-Upholstery ezenzakalelayo, i-Nautical Upholstery namaSaddles - uMajolo
Izimoto zakho zizoba zisha!
4.4 /5 amavoti (amavoti angama-38)
TheI-Autotappezzeria Majolo Luigi ngo-Michele Cipolla 91 a Palermo kuyangenelela ku- Upholstery dell 'Auto ukwenza ngcono i Ukupheka. Ikhethekile emkhakheni we Auto nezimoto, ku Izingubo zokugqoka Nautical. Iphinde ibhekane nokwakhiwa nokulungiswa Selle.
I-Autotappezzeria Majolo ePalermo - Ukulungiswa kwezihlalo, ukukhishwa kweNautical nokulungiswa kwesihlalo
TheIsikhungo sokupholisa nokulungisa izimoto saseSelle Majolo inakho konke okudingayo ukulungisa izihlalo zezimoto zakho. Kuyaziwa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi noma ngenxa yengozi, izihlalo ziyawohloka. Lungisa i Ukupheka, ukubeka i-padding entsha noma ukuyenza kabusha Upholstery aku-brainer weI-Autotappezzeria Majolo Luigi di Palermo. Uma kunalokho umane wadinwa yi- Upholstery futhi ufuna ukuyiguqula, ungenza ngezifiso eyakho Auto sibonga ikhono leI-Autotappezzeria Majolo Luigi. Isikhungo naso siyisikhungo ukulungisa Selle ngaphandle okwenza umsebenzi wokukhiqiza ngokucophelela e ukulungiswa kwesihlalo izithuthuthu nezithuthuthu.
I-Autotappezzeria Majolo ihamba phambili ezintweni zesikhumba zangaphakathi nokulungiswa kwesihlalo
TheI-Autotappezzeria Majolo Luigi ngo-Michele Cipolla a Palermo yindawo ekahle yokwelashwa kwami Ukupheka ngesikhumba, futhi Izingubo zokugqoka Nautical. Ngeshwa, ngaphandle kokulungiswa kahle, kuzokonakala ngokuhamba kweminyaka, njengoba kubucayi kakhulu kunendlela ocabanga ngayo. Lokhu I-Autotappezzeria inemikhiqizo efanele okufanele inakekelwe Ukupheka okwakho Auto. Uma ungafuni ukuthi isikhumba sakho sonakaliswe noma sivele sesonakele, ungalilahli ithemba: usengakwenza okuthile ukukulungisa.
Ngisho sehhashi izithuthuthu nezithuthuthu zidinga ukunakekelwa okuthile. Eqinisweni, imvula nesimo sezulu esibi ngokujwayelekile kungalimaza noma kukugqoke ngesikhathi esifushane. Ukunqoba lesi sehlakalo esicasulayo, isikhungo seMajolo siza ukukuhlangabeza ngemisebenzi yaso yokuqedela nokwakha Izihlalo. Isikhungo siyangenelela ngemisebenzi efike ngesikhathi ye ukulungiswa kwesihlalo izithuthuthu, iminyovu nezikuta, ezibabuyisela ekubukekeni kwabo kwasekuqaleni nasekusebenzeni okugcwele ngesikhathi esifushane kakhulu.
Okungaphezulu kokupholwayo: Izinto zokwakhiwa kwe-Nautical nezihlalo ezihlukile
Ukungenelela kwe ukukhanda nokwenza ngezifiso izigqoko zinembile futhi zinembile njengokungenelela kwe- Upholstery. the sehhashi ziphathwe noma zalungiswa lapha, zenzelwe ukuqinisekisa induduzo enkulu, kanye nokumelana okusebenzayo kuma-agent asemkhathini. Kepha hhayi kuphela: sehhashi enziwe nguMajolo nawo mahle kakhulu ukuwabona.
Emkhakheni weI-Autotappezzeria, UMajolo wazi kahle ukuthi akuzona izihlalo kuphela ezidinga iso kodwa nezinye izingxenye zeAuto. Eqinisweni, akumele sikhohlwe ukuthi amasondo okuqondisa namasumpa asetshenziswa ngokuqhubekayo futhi angaphansi kokugqokwa okuqhubekayo. Ungakhetha onkulunkulu Ukupheka in lokwela noma ezinye izinto ukunikeza inkazimulo entsha eyakho Auto. A Palermo e 'I-Autotappezzeria Majolo Luigi Uchithiwe inketho ye Upholstery dell 'Auto. Ngaphezu kwalokho, a Palermo futhi ungumholi emkhakheni we Izingubo zokugqoka Nautical.
I-Autotappezzeria Majolo Luigi ePalermo - Imidwebo
TheI-Autotappezzeria Majolo Luigi ngo-Michele Cipolla 91 a Palermo kungenelela kuma-degree angu-360 ku Upholstery dell 'Auto. Akudingeki njalo ukufaka i Ukupheka, kwesinye isikhathi mane ulungise noma upende ukubuyela kumbala wokuqala bese ulondolozela ukulungiswa. L 'I-Autotappezzeria Majolo Luigi uyakwazi ukukwenza ngaphandle kwezinkinga nangesikhathi esifushane kakhulu. THE Izingubo zokugqoka Nautical bazokhanya bebonga abasebenzi abanekhono emkhakheni. Thembela ngokuzethemba kochwepheshe bangempela emkhakheni we I-Upholstery Ezenzakalelayo, Ukulungiswa Kwesihlalo Sezigqoko kanye Nezingubo Zase Nautical.
Ikheli: Nge-Michele Cipolla, 91
I-POSTAL CODE: 90100
Umakhala ekhukhwini: 320 4669545
Inombolo ye-VAT: 03974190823